Monochrome (cancer cancer ọkpụkpụ)
Monochrome bu udiri oria akwara nke nwere aru ala. A na-ahụkarị Monochrome n'ime ndị nọ n'agbata afọ 10 ruo 40. Typedị akpụ akpụ a na - arụkarị arụ n’ọkpụkpụ.
- Enchondroma na-achọpụtakarị X-ray
A na-achọpụta ụdị ọrịa a n'ọrịa cancer okpukpu n'ihi ọdịdị ya na X-ray. Romfọdụ chromosomes na-eto ma na-akpata mgbu. Ọ bụrụ na monotherapy anaghị akpata mgbu ma ọ bụ na ọ pụtaghị ịmalite, ị gaghị ewepụ ya nke ọma ma ọ bụ gwọ ya. Enwere ike ịchọ biopsy iji chọpụta na ọrịa kansa ọkpụkpụ abụghị ọrịa kansa ọzọ jọgburu onwe ya.
N'ihe banyere nsogbu ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, ndị mmadụ kwesịrị ịga nyocha maka ịlele ma enwere mmepe ma ọ bụ mmụba ọzọ. A na-ejikarị eme ihe nyocha nke X-ray (lee Onyonyo) ịkọ atụmatụ mmepe ọ bụla. Kwa ọnwa isii, X-ray nwere ike ịdị mkpa, mana enwere ike iwe ya obere oge ma ọ bụrụ na ahụghị mmepe ọ bụla.
X-ray nke cancer mkpịsị aka nke mkpịsị aka: Enkondrom
Lee, anyị na-ahụ foto na-egosi otu ụlọ n’etiti mkpịsị aka. Kirie ihe onyonyo a ka itughee ya.
Umu Amdam ekwu, sị:
Ndewo! Ọ bụrụ na ị nwere otu chondroma nke ihe dị ka 20 cm n'ime femur, na-enweghị ọkpụkpụ dị n'akụkụ ya na-adịghị ike, na-enweghị ihe mgbu, ị ga-akwado ọkpụkpụ ọkpụkpụ si, dịka ọmụmaatụ, hip? Daalụ mbụ maka nzaghachi gị.
Ndo, ma na-amaghị nke ukwuu banyere ọrịa gị, ụlọ ọgwụ - mgbe ahụ anyị enweghị ike ikwu banyere nke a - ma si otú hapụ dị otú ahụ ntule gị GP ma ọ bụ oncologist. Tọọ onye dọkịta gị ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Anyị na-arịọ gị chi ọma.
N’obodo Unni ekwu, sị:
Daalụ maka azịza. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka a na-ezigara onye ọkà mmụta banyere oncologist? Nke bụ́ eziokwu bụ na a wara m ahụ́ dị otú ahụ n’afọ 1999, bụ́ nke mere ka uru ahụ́ dị n’ụkwụ a gharazie isi ike, nke n’aka nke ya butere mmerụ ahụ́ na-egbu mgbu. ct na-adịbeghị anya ka na-egosi nnukwu encondroma n'otu ụkwụ (femur). Yabụ, kedu ihe onye oncologist nwere ike inye aka?
Onye na-ahụ maka oncologist bụ naanị ọkachamara ahụike ọkachamara na-achọpụta ọrịa kansa - na di na nwunye n'ime ha nwere nnukwu ihe ọmụma nke nyocha ọhụrụ na usoro ọgwụgwọ. Kwesịrị ịnwale ịkpọtụrụ ọkachamara dị otú ahụ ọbụlagodi.
Na-adọrọ mmasị nke ukwuu. Anọla na onye orthopedist naanị. Ha kwuru na ọ nwere ike ịmalite n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ, mana ọ nweghị ihe ga-emesi ya ike. Nwere ike ikwu nke a ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike inye aka na aha otu n'ime ndị ọkachamara a, enwere m ekele, ọkachamma site na email ma ọ bụrụ na ọ ka mma. Daalụ ọzọ.